အကြောင်းအရာပေးပို့မော်ကွန်းတိုက်5၏စာမျက်နှာ 29 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery (စာမျက်နှာ 5)
2017 #NABShow - နေ့4အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2017 NAB ပြရန်၏စတုတ္ထ (နှင့်နောက်ဆုံး) နေ့ - နဲ့ wow! ကဘယျအရာတစျနေ့ဖွစျသညျ !!! 🙂နောက်ထပ်ဘုနျးနေ့က! သငျသညျ, အပေါငျးတို့သကိရိယာများကဝိုင်းနှင့် La La မြေတတ်နိုင်သမျှလုပ်သူကလူအများတို့သည်လည်းသူတို့ ", La La မြေ" ဟောလိဝုဒ်ကြောင်းပြောပါသော်လည်းသင် NAB Show မှာနေအခါ, ဒီနည်းကို MORESO ပင်ခံစားရသိကြ ...
2017 #NABShow - နေ့3အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2017 NAB ပြရန်၏တတိယနေ့ - နဲ့ wow! ကဘယျအရာတစျနေ့ဖွစျသညျ !!! 🙂အသံလွှင့် Beat မနေ့က Show ကိုတစ်ကြယ်လွှမ်းခြုံနေ့ကရှိခဲ့ပါတယ်, နှင့်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ကျိန်းသေသည့်ကျက်သရေပါ! အဆိုပါပြပွဲအလွသွား, ငါတို့အမှုထမ်းထူးချွန်အလုပ်လုပ်နေတယ် - သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုအတွက်အလွန်ဆာများမှာ ...
ယနေ့ 2017 NAB ပြရန်၏ဒုတိယနေ့ - ငါအဘယ်သို့ဆိုနိုင်သလဲ ထုတ်လွှင့် Beat မနေ့ကပြရန်တစ်ခုထူးချွန်လွှမ်းခြုံနေ့ကရှိခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့ယနေ့ပင်ပိုကြီးနှင့်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်သွားရဲ့! အဆိုပါ BB န်ထမ်းဖွယ်ရှိနေသည်ခဲ့ - ကိုပြရန်အပေါင်းတို့နှင့်ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းထဲကစကားလုံးအရခွင့်ပြုအတွက်အလွန်ဆာပ ...
2017 #NABShow - နေ့ 1 အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2017 NAB ပြရန်၏ပထမဆုံးနေ့ - နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆင့်အတိုင်းအတာပိတ်ထားသည် !!! တံခါးတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ကြပါပြီ - ဒါပေမယ့်ငါနှင့်ငါ့သမားတွေကျနော်တို့လုပ်နိုင်သည့် NAB သတင်းအားလုံးစုဆောင်း-up, setting, ပြီးသားနာရီဒီမှာပါပြီ! ငါ NAB Show ကိုငါ့ထံသို့ဆိုလိုတယ်ဘယ်လောက်သင်ပြောပြလို့မရပါဘူး! ငါဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် ...
တွင်-သတ်မှတ်ရန်နှင့်အလွန့်အလွန်မြင့်မားလွှဲပြောင်းဖို့ဒေတာကိုမိတ္တူလိုအပ်စတူဒီယိုများအတွက် JMR စျေး ICS မီဒီယာ MASSter 102
ကြမ်းတမ်း, ခရီးဆောင် data တွေကိုပုံတူ system ကို 1 မိနစ် JMR အီလက်ထရောနစ်, Inc ၏အရွယ်မှာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူထက်လျော့နည်းအတွက် 50TB duplicating မျိုးစုံဒစ်ဂျစ်တယ်ကော်ပီ ingests နှင့်စေသည်, ယနေ့, တစ်ဦးကြမ်းတမ်းလိုအပ်ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက် ICS မီဒီယာ MASSter 102 ၏အထွေထွေရရှိနိုင်ကြေညာခဲ့သည် Ultra-မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု duplicating ဘို့ခရီးဆောင်စနစ်။ မှာ NAB 2017 ၏တက်ရောက် ...
30,000 #NABShow မှ 2200 ခြေ Up ကို & 2017 မိုင်
... ထိုအပယ်သွားကြှနျုပျတို့သညျသှား! ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိန်း Fort Lauderdale အမှုထမ်းလေထုထဲတွင်သုံးဆယ်-တထောင်ခွကေိုတက်ယခုသည်နှင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏လမ်းဖို့ "သိန်စီးတီး" ပေါ်မှာဆိုရင် - Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး! ဒီမှာပြရန် NAB လာ! ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုငါ့အဆင့်ကိုငါ့ကိုအခြေချ-down မသွားပါစေလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါလေယာဉ်ပေါ်မှာစဉ် blogging စတင်ဖွင့်! (ဤအဓိပ်ပါယျမကောင်းတဲ့အလေ့အထဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးအားငါမရယ် ...
JMR နှင့်ဝင်ရိုးဗီဒီယို Form ကိုမိတ်ဖက် NAB 2017 မှာစားသုံးမိ-to-Delivery လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြရန်
JMR အီလက်ထရောနစ်, Inc ၏အရွယ်မှာသိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်ဝင်ရိုးဗီဒီယိုတစ်ဦးဦးဆောင်ဒီဇိုင်းစင်တာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, တတ်နိုင်, သိုလှောင်မှု-Agnostic မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲခေါင်းဆောင်, ယနေ့သူတို့ JMR ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် LightningTM မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ရိုး 2017, ရိုးဗီဒီယိုရဲ့ဆု၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေအတူပေါင်းစည်း Mac ကPro®နှင့်SHARE®ဖိုင်ဆာဗာထုတ်ကုန်ဟာယယဇ်ပူဇော် ...
သင့်ရဲ့ Pocket အတွက် SPROCKIT! #NABshow 2017
SPROCKIT လက်စွဲစာအုပ်ဒီမှာ Download လုပ်ပါ! ကုမ္ပဏီစတင်ခြင်းလွယ်ကူပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုစကေးနှင့်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့်ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ခြင်းခက်ခဲပါ! တစ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့အကြီးအစိတ်ကူးထားရှိခြင်းသည်တစ်ခုအားလုံးစတားအသင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အရင်းအနှီးပြုစုပျိုးထောင်မယ့်အစအဦးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမှာညာဘက်သောအရပ်, လက်ျာကုမ္ပဏီရှေ့၌သင်တို့၏ထုတ်ကုန်ရနျလိုအပျ ...
5 ၏စာမျက်နှာ 29«ပထမဦးစွာ...«34567 » 1020...နောက်ဆုံး»